गर्मी मौसमको फल काफल खानुका फाईदाहरु जान्नुहोस् ! - Sabal Post
तपाईले काफल खानुभएको छ ? पहाडमा पाईने अमिलो स्वादको फल हो काफल । यो गर्मी महिनामा पाईन्छ । यसको आकार लाम्चो र गोलो हुन्छ। काफलको रङ काँचोमा हरियो हुन्छ भने पाकेपछि यसको रङ बैजनी हुन्छ । काफललाई स्वादको रुपमा भन्दा पनि कतिले यसलाई औषधीको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । काफलले शरीरलाई के के कुरामा फाईदा पूर्याउछ भन्ने कुरा आज बताउन गईरहेका छौ । गर्मी याममा पहाडका वन पाखाहरूमा काफल देखिएको हुन्छ । लाम्चो र गोलो आकारको देखिने यो फललाई पहाडी फल पनि भनिन्छ ।यो काँचोमा हरियो हुन्छ । पाकि सकेपछी रातो र धेरै पाकेपछि बैजनी रंगको हुन्छ । यसको स्वाद अमिलो मिठो हुन्छ। पहाड तिरका मानिसहरू गर्मी याममा काफलको रूखमा चढेर काफल खानमा तल्लिन रहन्छन् । काफललाई हामीले फलको रुपमा मात्र प्रयोग नगरेर यसलाई औषधीको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । थाहा पाऔ काफलका औषधीय गुणहरू –
– पेट दुखेमा: काफलको बोक्रा चार ग्राम मिश्रीको काढासित चार दिन सेवन गरे जुनसुकै कारणले पेट दुखेको वा शुल भएको भए पनि आराम हुन्छ । – नेत्र रोगमा: काफलको बोक्रा मसिनु पिधेर आँखा रातो भएमा र आँखा बिझाएमा अन्जनजस्तै लगाइदिए लाभ हुन्छ । – दन्त पिडामा: काफलको बोक्रा पिसेर त्यही धूलोले मञ्जन गर्ने गरे दाँतको पिडा शान्त हुन्छ । तीन दिनमा विसेक भएन भने नून मिसाएर मञ्जन गर्ने र त्यसको काढा पकाएर मनतातो बनाएर कुल्ला गर्ने गरे लाभ हुन्छ । – घाऊ-चोटमा: बिग्रेको र चाँडै निको नहुने घाउमाकाफलको बोक्राको धूलो छरिदिए र त्यसैको काढा पकाएर प्रतिदिन धोईदियो भने निको हुन्छ ।
– नपुंसकतामा: काफलको बोक्राको धुलो भैशीका दूधमा पिँधेर सुत्ने बेलामा मणीको भाग छाडेर लिंगमा लगाई सुत्ने र बिहान ऊठेर धुने । यस प्रक्रिया केही दिनमै यौवन फर्केर आऐ झै हुन्छ । हस्तमैथुन गरेर आएको नपुंसकतामा पनि यसले लाभ गर्छ । – टाउको दुखाईमा: काफलको धूलो पारेर त्यसको नश लिए शिरको पिडा निको हुन्छ । – दममा: काफलका बोक्राको काढा पाँच ग्राम चीनी वा मिश्री मिलाएर पिउनाले खोकी, दम, हृदय रोग, अपच र अरूचीमा पनि लाभ गर्दछ ।
कर्णशूलमा: काफलको बोक्राको काढा तिलको तेलमा पकाई तेल मात्र रहेपछी चीसो पारेर दुई तीन थोपा तेल कानमा चुहाए कर्णशुल र पीप बग्ने तथा बहिरो हुन खोजेको पनि निको हुन्छ । – अतिसारमा: तीन गर्ाम काफलको बोक्रा र तीन ग्राम बालो बेलको काढा पकाई एक-दुई ग्राम तीन-चार पटक पिए अतिसारमा आराम हुन्छ । – मासिक धर्ममा: कैसर, कालो तिल र पुरानो गुड(शक्कर) र काफलको बोक्रा मिलाई काडा पकाएर पिलाए मासिकधर्म सम्बन्धी कष्ट आराम हुन्छ । यो औषधी खानासाथ अन्य खानेकुरा दिनुपर्छ ।
काफल भन्दा पनि यसको बोक्राले शरीररलाई निकै कुरामा फाईदा पूर्याउछ । यसको बोक्रालाई मसिनो बनाएर पिस्ने र आँखा रातो भएको ठाउँमा लगाउने गर्नाले आराम मिल्छ । घाऊ तथा चोटपटक लागेको खण्डमा पनि यसको धुलाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । काफलको बोक्रालाई चार ग्राम मिश्रीको काढासित एक हत्ता सम्म सेवन गरे जुनसुकै कारणले पेट दुखेको वा शुल भएको भए पनि निको हुन्छ । काफलको बोक्रा पिसेर त्यही धूलोले मञ्जन गरेमा दाँतको पिडा शान्त हुन्छ ।
अब बैंकमा भ्रमण वर्षको लोगो